Wararka Maanta: Jimco, Jun 8 , 2012-Prof. Cali Max'ed Geeddi oo sheegay in Nabad ka Dhalata dalka ay ku xiran tahay Ciidamada Qaranka oo la dhiso
Prof. Geeddi ayaa intaas ku daray in laga gaabiyay dhismaha ciidamada xoogga dalka, isagoo ku booriyay dowlada soo socota inay xoogga saarto sidii ay u dhisi lahayd ciidammo ay yeelato Soomaaliya.
"Ciidan Qaran oo Soomaaliyeed oo aan la dhisin yaan lagu riyoon in Soomaaliya ay nabadi ka dhalato oo sharcigii iyo kala-dambeyntii ay soo laabato," ayuu yiri ra’iisul wasaarihiii hore ee Soomaaliya.
"Ciidamada AMISOM ee hadda dalka ku sugan waxaaan ahaa mas’uulkii wax ka qaban qaabiyay heshiiskii ay dalka ku galeen waxna ka saxiixay. Waa loo baahan yahay balse baahida loo qabo ma ahan mid joogto ah ee waa mid KMG ah," ayuu yiri Prof.Geeddi.
Sidoo kale, ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya wuxuu hadalkiisa ku daray in siyaasaddii lagu heshiiyay ay ahyayd in la dhiso ciidammo Qaran inta ay AMSIOM joogto, isagoo xusay in taas laga gaabiyay, isagoo sheegay in Soomaaliya ay dhibka uga baxayso iyadoo hesha ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka jiraan saddex cadow oo kala ah: argagaxiso, burcad-badeed iyo musuqmaasuqa. Isaogo sheegay inuu yahay murshax u taagan xilka madaxnimo ee Soomaaliya uuna saddexdaas cadow la dagaali doono haddii la doorto.
"Anigu waxaan ahay murashax u taagan qabashada xilka Qaranka, mana doonayo inaan salaadiinta Soomaaliyeed iraado hebel xildhibaan iiga dhig ha isoo doortee, taasna xaaraan ayay iga tahay, siyaasiyiinta Soomaaliyeedna sidaas oo kale ayaa laga doonayaa," ayuu yiri.
Prof. Geeddi ayaa ra’iisul wasaare kasoo noqday dowladda KMG ah xilligii uu madaxweynaha ahaa Col. C/llaahi Yuusuf Axmed oo dhawaan ku geeriyooday dalka Imaaraadka Carabta, isagoo xilka uga tagay khilaaf soo dhexgalay isaga iyo madaxweynihii xilligaas.